eTurboNews Intatheli iza Kuthetha kwiNkomfa yeHlabathi yezoKhenketho ye-Eco ebalulekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » eTurboNews Intatheli iza Kuthetha kwiNkomfa yeHlabathi yezoKhenketho ye-Eco ebalulekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka • News Sustainability • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Srilal Miththapala, an eTurboNews umnxibelelanisi ovela eSri Lanka oye waba phambili ekukhuthazeni uphuhliso lokhenketho oluzinzileyo kunye ne-eco-tourism eSri Lanka umenyiwe ukuba anike enye yeentetho eziphambili kwiNkomfa yeZizwe ngezizwe ye-Eco Tourism eTaiwan, ecwangciselwe i-19 kunye ne-20 kaNovemba, 2021.
INkomfa yeHlabathi yezoKhenketho lwe-Eco ibanjwa phantse kwi-intanethi phantsi kombutho weTaiwan Ecotourism Association.
USrilal uza kube esenza intetho ephambili kusuku lokuqala lwesi siganeko sibalulekileyo seentsuku ezimbini.
Umxholo weseshoni yokuqala uthi "Iimpendulo kuPhuhliso loKhenketho lwe-Ecotourism phantsi kwe-COVID-19."
Inkomfa, eya kubanjwa phantse/kwi-intanethi, iququzelelwa yi I-Taiwan Ecotourism Association (TEA). Kuya kubakho iiseshini ezintathu ezisasazwa kwezi ntsuku zimbini, kwaye izithethi ezininzi ezibalaseleyo ziya kube zinikela intetho.
Kwiseshoni yoku-1 phantsi komxholo othi “Impendulo Ekuphuhliseni Indlela yoKhenketho lwe-Ecotourism phantsi kwe-COVID-19,” uSrilal uza kube ehambisa intetho ephambili enesihloko esithi “Ukukhusela iBiodiversity-Post COVID Tourism?”
USrilal wayeyi-CEO ye-Serendib Leisure iminyaka engaphezu kwe-10, kwaye emva koko wakhokela iprojekthi yeCeylon Chamber / EU, TSHINTSHA i-ASIA Greening iihotele zaseSri Lanka ngempumelelo iminyaka emine. Ngoku udla umhlala-phantsi kwaye ubandakanyeka kumsebenzi wokucebisana ne-ADB, i-GiZ, kunye ne-MDF (inyathelo le-Australia lamazwe amaninzi). Usebenza kwiibhodi zeLaugfs Leisure kunye ne-Asian Eco Tourism Network.